Heerka dugsiga sare, ardaydu waa inay dhammaystiraan laba semestar oo ah koorsooyinka farshaxanka wanaagsan ee buundada qalinjabinta. Waxaa jira waxqabadyo iskuduwaha manhajyo badan oo laga heli karo heerarka dhismaha ardayda si ay u ballaariyaan una bartaan xirfaddooda qoob-ka-ciyaarka, farshaxanka warbaahinta, muusikada, farshaxanka muuqaalka iyo tiyaatarka.
Ardaydeena waxaa si isdaba joog ah loogu xushay isu-imaatinka muusikada ee All-State oo lagu aqoonsan yahay tartamada farshaxanka qaranka.
Iyada oo ay weheliso bandhigyo farshaxan heer dugsi sare ah, waxaan sidoo kale martigelinnaa laba bandhigyo farshaxan oo degmada oo dhan ah oo sanadkiiba mar lagu qabto carwo farshaxan oo maxalli ah. Bandhigyadu waxay muujinayaan noocyo kala duwan oo dhexdhexaad ah oo ay abuureen ardayda. Macallimiinta farshaxanka ayaa doorta shaqada ardayda si loo muujiyo.